Khabar Kantipur » २१ बर्षीय जानुका बस्नेत बेपत्ता: खोजि गरिदिन आग्रह ! सक्दो शेयर गरौ !!
२१ बर्षीय जानुका बस्नेत बेपत्ता: खोजि गरिदिन आग्रह ! सक्दो शेयर गरौ !!
पछिल्लो समय पढ्न गएका छोराछोरीहरु लगातार जसो हराउन थालेपछि अभिभावकहरु चिन्तित भएका छन् ।
दिनानुदिन असुरक्षित बन्दै गैरहेको नेपालि समाजमा छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँन समेत डरमर्दो भैसकेको छ । यसैबीच अहिले काठमाडौ घर भएकी एक जना छात्रा हराएको खबर बाहिरिएको छ ।
यही जेठ १० गते शुक्रबारका दिनदेखि जानुका बस्नेत नाम गरेकी युवती हराएकी छिन । उनी अहिले २१ वर्षकी भएको र अविवाहित भएको परिवारको बताइएको छ । उनी चाबहिल गौरीघाटबाट हराइरहेको हुँदा फेला पार्नुहुने महानुभावहरुले सम्पर्क गरिदिनुहुन उनको आफन्तले अनुरोध गरेका छन् ।
सम्पर्कका लागि ९८४२९४२६७६, अथवा नजिकैको प्रहरी चौकीमा सम्पर्क गर्नु अनुरोध गरिएको छ ।